Avereno jerena ny Moto G 2015 | Androidsis
Moto G 2015 Review: Fahadisoam-panantenana lehibe tamin'ity taona ity
Francisco Ruiz | | Motorola, hevitra
Miverina izahay miaraka amin'ireo horonan-tsary sy lahatsoratra tianay hamongorana ny fidirana rehetra ao amin'ireo terminal Android vaovao natomboka teo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ary amin'ity indray mitoraka ity, dia faly aho manolotra anao ny saika voalohany any Espana, ity Moto G 2015 famerenana o Moto G, andiany fahatelo, terminal izay mikendry avo indrindra ary raha ny hevitro manokana dia nantsoina ny fahadisoam-panantenana lehibe tamin'ity taona 2015 ity.
Aza mieritreritra fa avy eto Androidsis dia lazainay fa ny Motorola moto G 2015 dia terminal ratsy lavitra azy, miaraka amin'ny fanantenana avo lenta sy mijery jery todika sy ireo maodely roa teo aloha izay nanamarika ny taloha sy ny taty aoriana, na mampitaha azy amin'ny terminal sinoa hafa miaraka amina endri-javatra mitovy na tsara kokoa aza ary ambany ny vidiny, tsy isalasalana, Taraiky lavitra any aoriana i Motorola amin'ity Moto G vaovao ity ary efa nandrasana hatry ny ela Izay, averiko ary foana araka ny hevitro manokana, dia antsoina ho fahadisoam-panantenana lehibe amin'ity taona 2015 ity.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Motorola Moto G 2015
2 Ny tsara indrindra amin'ity Motorola Moto G 2015 ity
3 Ny ratsy indrindra amin'ity Motorola Moto G 2015 ity
Famaritana ara-teknika an'ny Motorola Moto G 2015
modely Moto G andiany faha-3 XT1541
efijery 5 "IPS Cornnig Gorilla Glass HD 1280 x 720 sy 320 dpi
processeur Qualcomm Snapdragon 410 Quad Core amin'ny teknolojia 1'4 Ghz sy 64 Bit
Fahatsiarovana RAM Modely 1 Gb an'ny fitehirizana anatiny 8 Gb ary fitehirizana anatiny 2 Gb an'ny 16 Gb
Tahiry anatiny 8 Gb sy 16 Gb - maimaim-poana ho an'ny mpampiasa 4 Gb ary mihoatra ny 53 Gb tsirairay avy
Fakan-tsary aloha 5 Mpx 2560 x 1920
Fakan-tsary aoriana 13 Mpx 4160 x 3120 misy tselatra LED namboarina
Conectividad 2G - 3G - 4G - Bluetooth 4.0 - Wifi - Radio FM
Famaritana hafa IPX67 fanamarinana izay manome fanoherana ny rano
fepetra 142'1 x 72'4 x 11 mm
lanja Gramin'ny 153
vidiny 199 euro ho an'ny 8 Gb ary 229 euro ho an'ny memoara 16 Gb ao anatiny na dia tsy antenaina hamidy hatramin'ny volana septambra aza.
Ny tsara indrindra amin'ity Motorola Moto G 2015 ity
Tsy misy isalasalana, ny tsara indrindra azontsika jerena amin'ity Moto G 2015 vaovao ity dia ny fampidirana ny Snapdragon 410 processeur izay mazava tsara kokoa noho ilay maodely 400 avy amin'ny kinova taloha. Etsy ankilany, mendrika izany asongadino ny fanatsarana be eo amin'ny fakan-tsary ataon'izy ireo, na amin'ny fakantsary lehibe na aoriana misy 13 mpx izay miasa haingana be kokoa ary maka sary tsara kokoa noho ny teo alohany, ary koa amin'ny fakan-tsary eo anoloana izay efa mahatratra 5 mpx tsy azo hodinihina.
Etsy ankilany, ny feo mahatalanjona amin'ity Moto G 2015 vaovao ity, fa na dia tamin'ny maodely teo aloha aza dia efa nisy zavatra tokony holazaina ao aminy, amin'ity kinova vaovao ity dia mbola miasa ihany izy io ary lazaina ny marina, tena tsara be izany.
Ary tsy tokony hohadinoina koa izany Fanamarinana IPX67 izay manamarina azy ho maodely tsy tantera-drano, zavatra tokony hoderaina sy hotononina ary fanatsarana miavaka noho ny teo alohany.
Ny ratsy indrindra amin'ity Motorola Moto G 2015 ity
Arakaraka ny lanjany amiko, rehefa manazava tsara ao amin'ny Famerenana horonantsary momba ny Moto G 2015 azonao jerena amin'ny fampisehoana an'ity lahatsoratra ity, ity motorola moto G vaovao 3 ity dia tratry ny fahasahiranana izay mavesatra be rehefa manapa-kevitra ny hividy an'ity terminal Android ity.
Voalohany indrindra dia afaka manamarina izany ao amin'ny anao izahay fahatsiarovana fitehirizana anatiny ambany, fa na dia ity aza ny maodely 8 Gb, azon'ny mpampiasa ananantsika irery ihany maimaimpoana mihoatra ny 4,50 Gb fotsiny. Amin'io lafiny io, na dia misy aza ny fanohanana ny fitadidiana fitahirizana ivelany amin'ny alàlan'ny Micro SD, dia mahantra sy ambany dia ambany hatrany amin'ny terminal hafa izay amin'ny vidiny mitovy na amin'ny vidiny ambany aza dia manome antsika indroa ny fitadidiana fitahirizana anatiny.
Ny teboka ratsy iray hafa izay miavaka dia ny fahatsiarovana RAM kely an'ity Moto G 2015 an'ny 8 Gb ity, ary io ihany no ananany RAM 1 GB izay mazava, asehoko anao amin'ny horonantsary, dia latsaka amin'ny fampiasana isan'andro ny terminal. ao amin'ny horonantsary azonao jerena ny fomba misy fanakatonana manjelanjelatra amin'ny lalao sasany ary tsy afaka mitazona fahatsiarovana izany, izany hoe ao ambadika lalao toy ny Dead Triger 2 hanombohana azy indray nefa tsy mila mamerina azy intsony rehefa mihazakazaka azy indray isika.
Farany ary raha tsy ampy izany dia manana isika bateria tsy azo esorina ary ny voalaza fa fanoherana ny rano Izay tsy hatokisako loatra koa, ary rehefa nampianariko anao tamin'ny horonantsary ianao, arakaraka ny ahazoantsika antoka fa tsara apetraka ilay fonony aoriana, ao anatin'ny roa minitra ao anaty rano fotsiny, rehefa esorina ny fonony aoriana dia afaka nanao izany izahay zahao aloha toy ny rano niditra tao.
Naoty 3 kintana
Kitiho ny kitapom-bolanao
Habe mety amin'ny finday avo lenta
Fahatsiarovana fitehirizana anatiny ambany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Moto G 2015 Review: Fahadisoam-panantenana lehibe tamin'ity taona ity
Fanadihadiana mahaliana. Terminal inona, sinoa na tsia, no heverinao fa tsara indrindra amin'ity sokajy vidiny ity? Mihevitra ve ianao fa ny kinova RAM 2gb dia hanonitra ny tsy fahampiana?
Ilay eritreretiko fa amin'izao fotoana izao dia mety hosatrohana satroboninahitry ny ambany afovoany dia ny Doogee Valencia 2 Y 100 Pro miaraka amin'ny 2 Gb RAM, fitehirizana 156, mitovy ny fatrany sy ny kalitaon'ny efijery tahaka ity Moto G 2015 ity, mendrika fakan-tsary, Support Micro SD, 4 G Dual SIM ary 106 Euros ihany ny vidiny miaraka amina processeur 6735 Ghz Quad Core MT1P sy Mali T720 GPU. Afaka ora vitsivitsy dia hampakatra fampitahana nataoko ara-batana teo anelanelan'ny terminal sy Moto G 2015 ity.
Mazava ho azy fa ny maodely 2 Gb dia hanonitra ireo lesoka an'ity maodely ity, fa kosa hiakatra 229 Euros, izay efa vidiny lafo tokoa.
Raha ny marika terminal terminal sinoa mandeha tsara, voalohany indrindra dia manana Doogee, Lenovo, Ulephone, Elephone, Meizu na Xiaomi, izy rehetra avo lenta amin'ny vidiny tsy hita lany.
Ny lohahevitry ny ews ho an'ny € 229 dia manana safidy hafa tsara kokoa ianao ary ilay € 199 dia tsara kokoa aza tsy mijanona akory mieritreritra ny hividy azy. Pie ka ny sarony dia ny Moto X Play rehefa midina hatramin'ny telonjato sy telonjato ary zavatra euro.
Ry namana sakaiza tena hajaina na dia tsy mino aza aho fa hividy ity maodely 8 Gb ity izay fohy ny fahatsiarovana fitehirizana nefa fohy dia fohy, ary na hametraka karatra SD ianao na firy, ny data azonao atao ny famindrana ny karatra fampiharana sy ny lalao dia hitohy ho tsy ampy, mamela anao haingana be tsy misy fitahirizana fahatsiarovana azo ampiasaina ho an'ny lalao sy ny fampiharana.
Etsy ankilany, amin'ny fotoana ahazoantsika ny terminal misy an'io elanelana io sy ny vidiny miaraka amin'ny RAM tsy misy afa-tsy 1 Gb dia mahamenatra sy mampalahelo rehefa efa mametraka 2 Gb RAM ny terminal be mora kokoa.
Luis Manuel dia hoy izy:
Ny ekeko dia ny hoe afaka namonjy ilay giga xd izy ireo ary ho faly ny rehetra ary tsy hiresaka momba azy ireo….
Miarahaba. Misaotra tamin'ny pejy havaozina izahay
Mamaly an'i luis manuel
Jag dia hoy izy:
Eny, ho an'ny tsiro loko, raha tsy tianao ity kinova ity dia hisy ny kinova miaraka amina ram 2gb sy tahiry anatiny 16gb. Aleoko misafidy an'izany na dia manodidina ny 40 dolara aza.
Ity misy ram 1gb ho an'ny reniko, izay mandeha amin'ny whatsapp, youtube ary miantso fotsiny.
Mamaly an'i JAG
Izany no tiako holazaina, ity termiaal ity dia mitondra ny Hardware an'ny Moto E 2015, Smartphone iray amidy 100 Euros fotsiny, heveriko fa ity Moto G3 ity dia mendrika farafaharatsiny ary tamin'io vidiny io dia misy processeur ambonimbony toa The Snapdragon 615, a 2 GB RAM ary fahatsiarovana farafahakeliny 1 Gb. Izany dia tokony hanaraka ny fiakaran'ny Moto G ary ny fiakaran'ny vidiny 179 euro izay namidy ny vidiny dia modely alohan'ny 200 izay vidiny.
Bruno dia hoy izy:
Diso fanantenana ny mamaky an'ity lohateny ity mavo.
Nahavita asa lehibe i Motorola ary nanisy marika talohan'izay sy taorian'izay tao amin'ireo faritra refesina sy avo.
Ny fananganana, ny fitaovana, ny fanavaozana, ny feo sns, dia tsy mitovy amin'ny "sinoa" izay tsy ampy herintaona akory dia tsy nahomby ary fantatro tsara fa natokana hanamboarana finday aho.
Tsy dia manome hevitra matetika aho fa tezitra tamin'ity lahatsoratra ity satria nanana bisikileta E mampino aho, motera 2014 g, bisikileta roa E ny ray aman-dreniko ary ny rahalahiko moto g 2013 ary tsy nisy, averiko indray, TSY MISY, nanome olana ary mbola ranoka toa ny andro voalohany ihany izy ireo.
Tsy afaka milaza toy izany koa aho momba ireo "chinadas" izay entin'izy ireo hanamboarako isan'andro isan'andro.
Raha fintinina dia tsy azo ampitahaina amin'ny telefaona matotra hafa eny an-tsena amin'io vidiny io, afa-tsy ny bq sy Wiko.
Ny hevitro manetry tena
Valiny tamin'i Bruno
Tsy misy namana mavo Bruno, zava-misy fotsiny satria nanam-bintana aho nanandrana ny terminal Android marobe izay nolazaiko momba ny fiaviany sinoa, ary misy raha nisy teo aloha sy taorian'izay tsy nisy fisalasalana. AH! Etsy an-danin'izany, Motorola heveriko fa tsy dia manana Amerikanina be loatra izany satria ampahatsiahiviko anao fa fizarazaran'i Lenovo izy io, iray amin'ireo orinasa sinoa ireo izay tena nahomby tato ho ato.
Zavatra iray ny manandrana ary zavatra iray hafa ampiasaina. Tsy miaro ny motorola aho satria Amerikanina, tsy fantatro hoe aiza no namakianao azy. Lenovo dia marika tsara, xiaomi koa, jiayu, meizu, ZTE, THL, mazava ho azy. Fa ny doogee, ulephone, elephone, iocean, Inew, sns dia fako misy fiasa tsara amin'ny taratasy.
Misy zavatra iray izay tsy tonga amin'ny taratasy ary ny kalitaon'ny mikrô sy ny mpandahateny, ny fitaovana sy ny faharetan'ny mpampitohy microusb, sns.
Zavatra iray hafa izay tsy misy ifandraisany amin'ny toetra mampiavaka azy dia ny vidin'ny fanamboarana ka tsara kokoa koa ny mividy Motorola noho ny fahazoana betsaka ny kojakoja.
Ary finday inona no ampiasainao?
Yi dia hoy izy:
Famerenana mahatsiravina re izany.
Valio i Yi
Misaotra namana, izany no mitranga rehefa milaza mazava ny zavatrao, satria tsy misy fanatisme na manao kofehy amin'ny marika iray izy ireo. Afaka tian'ny rehetra izany.
:v dia hoy izy:
Rehefa mamaky aho (tsy fantatro raha marina izany), amin'ny andiany manaraka Android (Android M) dia azo atao ny mamindra malalaka kokoa ny fampiharana amin'ny sd, noho izany dia mety nisafidy ny hamela fahatsiarovana anatiny 8 GB ao anaty Motorola fiandrasana ny endrika ho avy.
Eny mazava ho azy HAHAHAHAHA!. Tokony ho hitanao ny fomba ahafahanao miaro sy manamarina an'io Motorola io, miaraka amin'ireo sombin'ny Moto G izay efa niasa, amin'izao fotoana izao dia makà fantsona misy RAM 8 Gb fotsiny izay tsy azo apetraka amin'ny fampiharana fotsiny sy eo amboniny apetraka aminao io. 200 euro. Tokony ho zava-misy ianao ary tahaka ny nitiavako ny marika Moto G hatrizay, tsy maintsy ekenao fa nanakorontana izy ireo saingy tsara.
Andao hojerentsika hoe firy amin'ireo olona voahilikilika eto amin'ity lahatsoratra ity no marani-tsaina izay hividy an'ity terminal ity miaraka amin'ny fitehirizana 8 GB fotsiny, izay tsy mbola namela 5 ho maimaimpoana sy ambony fotsiny miaraka amin'ny RAM 1 GB fotsiny isika.
Ry namako, inona no nitranga tamin'ny fanomezana Doogee F3? Miarahaba!
Misy zavatra izay tsy hitako fa voatsikera tsara amin'ity lahatsoratra ity. Misy fianjerana ve rehefa milalao satria tsy misy afa-tsy 1Gb.? Ny marina dia raha te hilalao aho dia mividy karazana terminal hafa, ity terminal ity dia mieritreritra ny hiresaka ary amin'ny WhatsApp ary amin'ny zavatra hafa. Gamers dia vitsy an'isa raha oharina amin'ny maro an'isa izay maniry izany noho ireo zavatra ireo.
Ary azoko tsara fa tsy azo esorina ny bateria satria tsy maintsy hakatona izy io mba tsy ho tantera-drano.
Raha tsy izany tena tsara dia mbola apetraka ireo fahatsiarovana 8Gb. Mahamenatra aho.
Betsaka ny mpampiasa mampiasa terminal eo anelanelan'ny elanelana mba hilalao ihany koa ary ny ankamaroan'ny terminal izay tsara vintana nosedraina teto dia manome valiny tena tsara ho an'ny vidiny ambany noho io. Raha ny fanoherana ny rano ary ny bateria dia tsy maintsy esorina, tsy marina izany, amin'ny fitsapana ny Samsung Galaxy S5. Ny fananana bateria tsy azo esorina dia midika fa rehefa manomboka tsy mahomby izy, ny vidin'ny fanoloana azy dia ho avo kokoa noho ny terminal izay azonao ovaina ny anao manokana amin'ny alàlan'ny fividianana fanoloana tany am-boalohany tokony ho 20 euro, raha tsy izany dia voatery ianao ho mahay mandray andraikitra na hampiasa ny SAT, izay mazàna tsy dia lafo akory.
Miarahaba ny namako.
Ny marina dia na ny reniko aza tsy nividy telefaona ka zara raha nisy, nandany ady tamin'io aho satria mihantona, toy ny efa nataony tamin'ny Alcatel ot pop c7 izay ananany, androany dia tsy mahomby ny marina .. Tsara diniho!
Raha ny doogee valencia 2y100pro, azonao amporisihina ve izy io? Novakiako fa fohy kely ny bateria, matetika aho no mampiasa finday ary tsy tiako hikatona amiko io na rehefa afaka 3 volana dia mandeha ny finday. Tsy mendrika ahy mihitsy ary mila Mividy iray hafa aho, inona ny tombony sy fatiantoka an'ity finday ity? Raha tsy manome soso-kevitra an'ity finday ity ianao, inona avy ireo maodely atoro anao? Misaotra betsaka anao amin'ny valiny, arahaba
Volkswagen dia manambara drafitra ho an'ny Android Auto
Ireo fandikana ireo dia mampiseho izay ho endrik'ilay volavolan'i Samsung Galaxy Note 5